I-chanterelles ezityiweyo- Iresiphi | Indlela yokupheka
UAlicia tomero | | Iimenyu zabantwana, Iresiphi, Iiresiphi zamakhowa
Kweli xesha lekwindla sinokulungiselela amakhowa amnandi kwaye kule meko amanye chanterelles ezimnandi. Le recipe iyamangalisa kwaye banenkcubeko yaseSpain ngenxa yendlela elungiselelwe ngayo. Siyakuthanda ukulungisa ezi zityana zincinci apho ungaphoswayo kukuchukumisa igalikhi kunye neparsley.
Ukuba uyathanda ukulungiselela iiresiphi zasekwindla ungazifumana «ithanga cream, amakhowa kunye neembotyi ezimhlophe»Okanye yethu«jonga ngamakhowa«.
I-400 g yee-chanterelles
Isiqingatha se-anyanisi enkulu
Amasebe ambalwa eparsley entsha
Iipuni ezimbalwa zeoli yeoli
Silungiselela ii-chanterelles. Sicoce ngelaphu naluphi na uhlobo lokungahlambuluki, kuba akukho mfuneko yokuzifaka emanzini, okanye ukuzicoca phantsi kwetephu. Kuyacetyiswa ukuba ungazihlambi kuba kungenjalo balahlekelwa livumba. Nje ukuba silungiselele sazisika zaziingceba.
Sinqumle itswele ngamaqhekeza amancinci kwaye zontathu Iigalikhi Sinqunqa sibe ngamaqhekeza amancinci kakhulu. Sitshisa ipani ngokutshiza kwe ioli yeoli kwaye sibeka itswele kunye negalikhi ukuze songe.
Xa siyikhuphile sidibanisa i-nIi-íscalos eziginyiweyo, iparsley kunye nesal. Siye sibayeke bapheke okwemizuzu embalwa de sibone ukuba bayathamba.
Xa sele kuphekiwe sidibanisa isiqingatha seglasi yewayini emhlophe Namanzi. Siyivumela ukuba ipheke imizuzu embalwa de sibone ukuba zithambile. Ukuba kunyanzelekile ukongeza amanye amanzi amancinci singayenza.
Ngoku sikulungele ukubakhonza sishushu kwaye sifefe iparsley entsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziya » Iimenyu zabantwana » IiChanterelles eziTyiweyo
Amaqanda aqhekezayo ngamakhowa aneham
Iitapile omelette kunye nebhekoni